नेपाल आज | दुई मन्त्रालय पाएका रामचन्द्रलाई मन्त्री छान्नै सकस, को को छन सम्भावित ?
दुई मन्त्रालय पाएका रामचन्द्रलाई मन्त्री छान्नै सकस, को को छन सम्भावित ?
बिहिबार, २१ असोज २०७८ गते प्रकाशित - नेपाल आज
प्रधानमन्त्री भएको लामो समयसम्म पनि मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्न नसकेर शेदरहादुर देउवालाई तनाव छ। अर्कोतर्फ मन्त्रालयको भागवण्डा मिलाउन नसकेर थाकेका गठवन्धनका नेताहरले जसोजसो सवैको मुख वुझो लगाएका छन् ।
तर, पार्टी भित्रैकै आन्तरिक किचलोका कारण दलका शिर्ष नेताहरु समस्यामा परेका छन् । गठवन्धनका चार दललाई मन्त्री कस्लाई वनाउने भन्ने चटारो छ। एकलाई वनाउँदा अर्को रिसाउने, अर्कोलाई वनाउँदा अर्को रिसाउने समस्याले नेताहरु आजित छन् ।
यो समस्या अन्य दलको तुलनामा नेपाली कांग्रेसभित्र धेरै देखिएको छ । विभिन्न गुटमा जेलिएको सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पनि तनावमा छन् । उनलाई आफनो समूह मिलाउन हम्मे–हम्मे परेको छ।
मन्त्रीका आकांक्षी धेरै तर मन्त्रालय कम पाउँदा पौडेलाई समूह मिलाउन गाह्रो भएको हो। मन्त्रीमा पठाउने नाम टुंगो लगाउन बुधबार आफ्नै निवास बोहराटारमा पौडेलले समूहको बैठक बोलाएका थिए। तर, मन्त्रालयको संख्या एकिन नभएपनि छलफल बिनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो।
छलफलमा नेता पौडेलले मन्त्रिपरिषद्का लागि सांसद तेजुलाल चौधरी तथा महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले डा. मिनेन्द्र रिजाल र दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेका थिए भने नेता प्रकाशमान सिंहले काठमाडौंका सांसद राजन केसीलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेका थिए ।
तर, प्रधानमन्त्री देउवाले दुई जनाभन्दा बढीलाई मन्त्री बनाउन नसकिने जवाफ दिएपछि पौडेल समूहवाट नाम सिफारिस हुन नसकेको जनाईएको छ।
यसैगरी, देउवाले एउटा मन्त्री पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई पनि दिने तयारी गरेका छन् । सिटौला समूहबाट उमाकान्त चौधरी मन्त्री बन्ने तय भइसकेको नेताहरूले वताएका छन् । देउवाले आफनो समुहवाट भने पुष्पा भुसाललाई मन्त्री बनाउने योजना बनाएका छन्।
सत्ता गठबन्धनका चार दलबीच भएको सहमतिअनुसार कांग्रेसको भागमा आठ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री परेका छन्। जसमध्ये तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री सरकारमा सहभागी भइसकेका छन्।
कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी बालकृष्ण खाँण (गृहमन्त्री), ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की (कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री), नारायण खड्का (परराष्ट्रमन्त्री) र उमेश श्रेष्ठ (स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री) सबै देउवानिकट हुन्।